Tsindrio ilay hoe Hiditra raha te hiditra ao amin'ny kaontinao ianao. Asain'ilay tranonkala mampiasa kaonty Internet iray ianao avy eo mba hahafantarana anao. Azo atao koa ny mampiasa tenimiafina. Tena ilaina fantatra ny zavatra tokony hatao rehefa te hiditra amin'ny kaontinao ianao. Hifandray amin'izany ny ankamaroan'ny fanontaniana hapetraky ny solontena avy any ivelany.
Kaonty Internet misy fiarovana
Hisy lisitry ny kaonty Internet misy fiarovana eo am-piandohan'ilay pejy.
Izay adiresy e-mail tokana nosoratan'ny solontena tsirairay tao amin'ny fangatahany ihany no tokony hampiasainy isaky ny hiditra ao amin'ny kaontiny izy. Miankina amin'iny adiresy iny ny kaonty Internet tokony hofidiny.
Ohatra: Raha hoe jaona_solontena@gmail.com no adiresiny e-mail, dia ilay kaonty Internet hoe Google no hofidiny. Hisokatra ny tranonkalan'io kaonty Internet io avy eo mba hidirany ao amin'ny adiresiny e-mail gmail.
Vokatr'izay dia tsy hisy tenimiafina sy fanazavana tsiambaratelon'olona hotehirizina ato amin'ity tranonkala ity. Izay mampiasa adiresy e-mail fantatra ihany no ho tafiditra amin'ny kaontiny ato amin'ity tranonkala ity.
Raha misy olona tsy manana iray amin'ireo kaonty Internet ao amin'ilay lisitra, dia azon'ity tranonkala ity omena tenimiafina izy. Rehefa mifidy an'ity fomba iray ity izy, dia mila hampiditra adiresy e-mail iray. Toy ny tetsy ambony, dia izay adiresy e-mail tokana nosoratan'ilay solontena tao amin'ny fangatahany ihany no tokony hampiasainy isaky ny hiditra ao amin'ny kaontiny izy.
Handefasana tenimiafina amin'ny e-mail ilay solontena, ary tokony hampiasainy ilay izy rehefa hiditra ato amin'ity tranonkala ity izy. Raha tsy nahazo e-mail misy tenimiafina izy, na tsy tadidiny ilay tenimiafina, dia azony atao ny manandrana an'ilay hoe Avereno alefa ilay tenimiafina. Raha mbola misy olana, dia afaka miantso ny ekipa mikarakara an'ilay tranonkala ny Komitin'ny Fandraisam-bahiny mba hahazoana fanampiana.
Kaontin'ny solontena avy any ivelany
Rehefa misy olona miditra ao amin'ny kaontiny ato amin'ity tranonkala ity, dia afaka mifidy izy hoe Solontena ve izy sa Mpitory eo An-toerana hanao asa an-tsitrapo amin'ilay fivoriambe.
Mba hahatafiditra azy tanteraka ao amin'ny kaontin'ny solontena dia tsy maintsy ampidiriny ny Nomerao Famantarana ny antokony misy azy ilay solontena. Azon'ny solontena atao ny mangataka fanampiana any amin'ny mpitantsoratry ny fiangonany.
Kaontin'ny mpitory eo an-toerana
Mba hahatafiditra azy tanteraka ao amin'ny kaontin'ny mpitory hanao asa an-tsitrapo, dia tokony hifidy tanàna iray hanaovana an'ilay fivoriambe manokana ao amin'ilay lisitra mipoitra eo ilay mpitory.
Hifidy ny fiangonana misy azy izy avy eo. Hisy olona roa ao amin'ny fiangonany (ny anti-panahy mpandrindra sy ny mpitan-tsoratra matetika) hahazo e-mail aorian'izay, ka izy ireo no hanamarina ny mombamomba an'ilay mpitory sy hanaiky ny fangatahana nalefan'ilay mpitory tany amin'ny Komitin'ny Fandraisam-bahiny.
FANAMARIHANA: Marina fa afaka mangataka tenimiafina ny mpiasa an-tsitrapo mba hidirana ao amin'ity tranonkala ity sy hamenoana fangatahana. Izay mpitory manana kaonty Internet misy fiarovana ihany anefa no azo omena alalana hijery fanazavana momba ny solontena avy any ivelany mba hiarovana an'ireny fanazavana ireny. Ampirisiho àry ny mpiasa an-tsitrapo mba hampiasa iray amin'ireo kaonty Internet ao amin'ilay lisitra fa tsy hangataka tenimiafina.
Tsy azo adika na alain-tahaka © 2020 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. | Fifanekena | Fifanekena Momba ny Tsiambaratelo